Umatshini wokusika wePlasmayenye yeendlela ezilungileyo zokusika intsimbi, intsimbi engenasici, ubhedu kunye nealuminium. Unokusika isinyithi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo kuba iyatshisa ngesinyithi seplasma. Xa ukhetha umatshini wokusika weplasma olungileyo, sibhale isikhokelo kwizinto ezili-10. Ukuba unomdla ekuthengeni ukusika kwesinyithi, jonga ivenkile yensimbi ekwi-Intanethi. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngomatshini wokusika weplasma, nceda ujonge isikhokelo somthengi somatshini wokusika iplasma.
Umatshini wokusika wePlasma ufuna uxinzelelo lomoya ukuvelisa iplasma, enokuthi ibonelelwe ngesakhelo somoya esakhelweyo okanye ukubonelelwa komoya okuxineneyo. Zombini ezi ntlobo zisebenza kakuhle, kodwa xa ukhetha i-plasma cutter, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi efanelekileyo kakhulu kuwe. I-compressor yomoya eyakhelweyo iyabiza, kodwa oko kuthetha ukuba ungaphatha umsebenzi omncinci ngokukhawuleza.
Xa ukhetha Umatshini wokusika iplasma, umatshini owufunayo ngumgangatho ophezulu kwaye uya kuma uvavanyo lwexesha. Oomatshini bokusika iPlasma abukho ngexabiso eliphantsi, ke qiniseka ukuba into oyithengayo yomelele kwaye ayophuki xa usenza into ebalulekileyo. Khetha kubathengisi abathembekileyo. IHypertherm, iMiller, iLincoln kunye ne-ESAB zonke ziyafumaneka kwisikhululo segesi seBaker
3. Iarc yobukhulu
Umqhubi wenqwelomoya yinto yokusika enika iarc ezinzileyo ngobomi obude obunokusetyenziswa, kuba ungasika isinyithi ngaphandle kwencam yetotshi yesitrato. Oku kuluncedo ukuba unqumle inkonzo erusi ngenxa yokuba awunyanzelekanga ukuba ucoce isinyithi kwaye uyibethe. Le yinto entsha ngokwentelekiso, nangona kunjalo, oomatshini abaninzi bokusika iplasma banalo olu phawu, ngaphandle kweemodeli zexabiso eliphantsi.
Zintathu izinto onokukhetha kuzo ombane, Umatshini wokusika iplasmaingathengwa. Unokuthenga i-115V, i-230V okanye izixhobo zombane. Umatshini wokusika iplasma we-115V uluncedo kubaqalayo abangadingi mandla maninzi kwaye basike ekhaya. Ezi plug kwiplagi yakho yasekhaya, kodwa azinawo amandla angako. Ukuba unegalelo elingu-230V, emva koko ufuna i-generator ukuze uyiqhube. Ukuba unokhetho olunye onokukhetha kuzo, unokutshintsha ngokulula iiplagi ngokuxhomekeke kubungakanani bamandla owafunayo kunye nendalo yakho.
5. Ukwehlisa umgangatho
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe bubunzima bentsimbi enokusikwa ngumsiki weplasma. Cinga ngobukhulu besinyithi onokufuna ukusika, emva koko ukhethe umatshini onokusika. Ukuba unayo i-inshurensi, kungcono ufake isicelo sokufumana inqanaba eliphezulu, kwimeko apho
Zintathu izinto ezahlukileyo zokuthotywa ekufuneka ziqwalaselwe:
Ikaliwe amandla okusika: ingasika i-intshi ye-10 (IPM) ubukhulu besinyithi ngomzuzu.
Ukusika umgangatho: ubukhulu ngesantya esisezantsi - oku kuya kuba sisinyithi esityebileyo.
Unokunqunyulwa ubuninzi. Iyacotha kakhulu kwaye isenokungabi sicocekile kakhulu.
6. Umjikelo womsebenzi
Umjikelo womsebenzi ubhekisa kubungakanani bokusetyenziswa komatshini wokusika iplasma onokuqhubeka nawo ngokuqhubekayo. Umjikelo omkhulu wokusebenza komatshini wokusika iplasma ungasetyenziselwa ixesha elide, umjikelo womsebenzi wawo nawuphi na umatshini uya kuncitshiswa ngokunyuka kwamandla ombane. Fumana ipesenti ephezulu nakweyiphi na indawo enikezelweyo ukuze ufumane owona msebenzi ungcono.
Oomatshini bokusika iPlasma banokuba nobunzima ukusuka kwiipawundi ezingama-20 ukuya kwiiponti ezili-100 kwaye zisetyenziselwa oomatshini abarhabaxa bemizi-mveliso. Ukuba ufuna ukuthatha umsiki wakho weplasma emsebenzini uye emsebenzini, uya kufuna into onokuyiphatha ngaphandle kokubuya umva! Kodwa khumbula, oomatshini abakhaphukhaphu abanakusika isinyithi njengobuninzi njenge-cutter yeplasma enkulu.
8. Ukunciphisa umgangatho
Ukusika umgangatho kubhekisa kucoceko kunye nokuguda kokugqitywa kwemveliso. Owona mshini usika iplasma ngowona mgangatho uphakamileyo wokusika, ke ukusika kuya kubonakala kubukhali kwaye kucocekile, kwaye awuzukufuna ukuchitha ixesha ulicoca ukuze ubonakale kakuhle.
9. Iindleko zokusebenza
Ixabiso lokusetyenziswa komatshini wokusika iplasma liyahluka kakhulu phakathi koomatshini abohlukeneyo kunye nezinto ezisetyenziswayo. Funda inqanaba lokusetyenziswa kwesixhobo sakho ukonga imali ngokuhamba kwexesha. Oomatshini bokusika iplasma abashushu bayabiza, kodwa banexabiso eliphantsi lokusebenza, kwaye ngenxa yokutya kwabo okugqwesileyo, banokugcina imali ekusebenzeni ixesha elide.
10. Ukusika itotshi
Ubude be-flare yinto ebalulekileyo yokuqwalaselwa. Ukuba usebenza kwiworkshop enkulu enoomatshini abanzima, uyakufuna itotshi ende ukuze usebenze kwiindawo ezahlukeneyo ngaphandle kokuhambisa isixhobo esisika iplasma. Ukuba uza kusika ixesha elide, jonga isibane esilingana nesandla sakho ukunceda ukuthintela iintlungu.